New Zealand: Masaajidkii Al Noor oo dib loogu laabtay - BBC News Somali
New Zealand: Masaajidkii Al Noor oo dib loogu laabtay
23 Maarso 2019
Image caption Dad aad u yar ayaa maanta loo oggolaaaday in ay dib ugu laabtaan Masaajidka Al Noor
Masaajidka Al-Noor ee kuyaal magaalada Christchurch ayaa markii ugu horraysay waxaa dib ugu laabtay dadkii ku tukan jiray kadib toogashadii halkaas ka dhacday ee tobonaanka qof ay ku dhinteen.
Dhismaha ayaa la xiray si booliisku ay baadhitaan ugu sameeyaan hase ahatee maanta oo Sabti ah ayaa loo oggolaaday dad tiro yar in ay dib ugu laabtaan.
Konton qof ayaa ku dhintay labo weerar oo toogasho ah oo 15-kii bishaan Maarso ka dhacay labo masaajid oo kuyaal dalka New Zealand.
Markii masaajidka Al Noor la furay, dad gaaraya 3,000 oo qof ayaa socod ku dhex maray magaalada Christchurch si dadkii loogu baroor diiqo xushmadna loogu muujiyo dadkii ay waxyeelladu soo gaartay.
Dad aad u fara badan ayaa socod ku dhexmaray magaalada ayagoo aammusan, waxayna siteen boorar ay ku qoran yihiin erayo muujinaya nabad iyo kuwo looga soo horjeedo isir nacaybka.
"Waxaan dareemaynaa in nacaybku uu mugdi kusoo kordhiyey magaalada" ayay tidhi Manaia Butler, oo ah ardayad 16 jir ah oo wax kasoo qaban qaabisay isu soo baxa. " Jacaylka ayaa ah dawada ugu xoogga badan ee mugdiga ka saari karta magaalada". Ayay tidhi.
Aden Diriye, oo weerarkaas ku waayey wiil 3 sano jir ahaa, ayaa maanta dib ugu laabtay masaajidka Al-Noor. "Aad ayaan u faraxsanahay" ayuu yidhi salaaddii kadib. " Waxaan usoo laabtay in aan misaajidka dib u dhisno, si loogu tukado.
Ninka reer Australia ee 28 jirka ah, laguna magacaabo Brenton Tarrant, oo sheegtay in uu yahay nin caddaan ah oo dadka kale ka sarreeya, ayaa lagu oogay hal dacwad oo ah in uu gaystay dil wadareed iyo in uu gaystay weerarradaas waxaana la filayaa in dacwado kale lagusoo oogo.
Baroor diiq ayaa loo sameeyey dadka waxyeelladu kasoo gaartay weerarka.